"Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany (eo anatrehan’i Jesosy Kristy): Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy; ary raha fantatsika fa mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy." 1 Jaona 5:14-15
Hita ao amin’ny voalohandohan’ny Baiboly ny tantaran’i Isaka, zanaka lahitokan’i Abrahama sy Saraha vadiny. Nampanantena Andriamanitra fa hahazo taranaka maro i Abrahama, amin’ny alalan’i Isaka. Momba anefa i Rebeka vadin’i Isaka, ka nandritra ny roapolo taona dia tsy nanan-janaka izy ireo. Ka izao no tantarain’ny Genesisy amintsika: “Ary Isaka nangataka tamin’i Jehovah ho an’ny vadiny, satria momba izy; ary nohenoin’i Jehovah ny fangatahany, dia nanana anaka Rebeka vadiny” (Genesisy 25:21). Niteraka kambana mirahalahy izy, dia Jakoba sy Esao.
Tena manaitra ny filazana ny vavaka nataon’i Isaka sy ny valiny nomen’Andriamanitra. Asehon’Andriamanitra amintsika fa tiany ny mampiditra ny finoana sy ny vavaky ny olony, na dia ao amin’ireo drafitra lehibe indrindra ataony aza.
Avy amin’izy mivady tsy nanan-janaka ireto no hipoirana firenena iray manontolo, izay hiavian’ny Kristy, dia Jesosy, Ilay Zanak’Andriamanitra, Ilay Mpamonjy izao tontolo izao. Talohan’ny nahariana izao rehetra izao no efa namolavolan’Andriamanitra izany drafitra izany; tafiditra tao ny finoan’ireto mpivady mbola tsy nanan-janaka ireto.
Ry kristiana, toy izany hatrany no anehoan’Andriamanitra ny heriny ao anatin’ny fahalementsika. Tsy miova mihitsy Izy. Mamaly ny finoana Izy, mamaly ny vavaka ataon’olona iray, mba hahatanteraka ny drafitra rehetra nokasainy.
Tsy mampirisika antsika haharitra mivavaka ve izany? Irin’Andriamanitra ireo vavaka ataontsika, andrasany ireny mba hitahiany, mba hanatanterahany ireo drafitra nokasainy, izay efa nomaniny ela taloha.
Koa aoka isika hangataka faharanitan-tsaina aminy mba hahay hivavaka araka ny sitrapony, ary faharetana amin’ny finoana, izay tiany ho hita sy homena valisoa!